INSOLITE Archives - KU SOO DHAWAADA
Fiidiyow Kitaabka Quduuska ah ayaa laga helay dukaanka dabka baabi'iyay Nuqul ka mid ah Kitaabka Quduuska ah ee Kitaabka Quduuska ah (duwanaanta dhaqanka Ghana) ee suuqa Odawna ee magaalada Accra, ayaa ka soo baxay dab qabadsiiyay ...
Aaminaad: Caawinaad "Waxaan la yeeshay isbahaysi dhiig dhiiggaygii hore, sideen uga noqon karaa"
Aaminaad: Caawinaad "Waxaan la galay axdi dhiiggeygii hore, sideen u kansali karaa" Kenyanka loo aqoonsaday inuu yahay @Mekau oo ku leh Twitter-ka ayaa bartiisa bulshada ku qayliyay markii uu sameeyay dhiig leh ...
Markii Doug Falter, oo ah badmareen Mareykan ah oo jecel mowjadaha waaweyn, uu ka soo dhacay boorkiisa meel ka baxsan xeebta Hawaii (Mareykanka), wax fikrad ah kama qabin inay u sii gudbi doonto Filibiin, oo in ka badan 8.000 km u jirta. In ka badan laba sano kadib ...
Kalsooni: Waxaan cabayaa kaadida lo'da maalin kasta
Kalsooni: Waxaan cabayaa kaadida lo'da maalin kasta Jilaaga caanka ah ee Bollywood ayaa dhawaan ka yaabsaday taageerayaashiisa isagoo ugu sheegay inuu u cabo "kaadida lo'da maalin kasta". Hadaad u malaynayso qashinka xoolaha ...
Dhilladu waxay muujisaa cibaadada waxayna muujisaa wax lala yaabo oo ku saabsan wadaadka
Dhillana waxay la timid cibaado buuxda waxayna muujisay wax lala yaabo oo ku saabsan wadaadka. Xaaladaha ugu macquulsan ee midba midka kale kaliya ayaa sanadkaan sameeya ...
Aaminaad: Waxaan aaminay 50 milyan oo ah gabadheyda aan guursanayo kahor safarkeyga muddo usbuuc ah laakiin halkan waa…
Kalsooni: Waxaan aaminay 50 malyan oo ah ninkayga kahor safarkayga mudo usbuuc ah laakiin waa tan layaabka markaan kusoo laabtay magacaygu waa amiir waxaan ahay ganacsade. Waxaan la noolahay gabadha aan isqabno iyo gabadhayada 6 jirka ah. Aniga…
Kalsooni: Waxaan rabaa furiin, xaaskeygu wey igu garaacdaa waxba, laakiin iyadu ma rabto
Kalsooni: Waxaan rabaa furiin, xaaskeygu waxay igu garaaceysaa wax aan jirin, laakiin iyadu ma rabto Sheekadan aan kuu sheegayo waa qeyb noloshayda ka sii xanuun badan. Magacaygu waa Williams D. Waxaan ku jiraa afartan iyo afartan waxaan ahay ...
Kalsooni: Waxaan ogolaaday inaan aado meeshiisa, anigoon ka fikirin inay sidan ku dhamaanayso
Kalsooni: Waxaan ogolaaday inaan aado meeshiisa, anigoon ka fikirin inay sidan ku dhamaanayso Magacaygu waa Elizabeth waana dhacdo dhab ah oo nolosha igu dhacday. Ma dhihi doono magacayga dambe iyo dadka dhabta ah ...
ninka ugu "foosha xun" oo guursaday xaaskiisa 3aad (sawirro)
Nin 'ugliis' ayaa guursaday xaaskiisa 3aad (sawirro) Majaajiliiste Godfrey Baguma oo loo caleemo saaray ninka ugu foosha xun ugandha ayaa dhowaan guursaday xaaskiisa saddexaad. Aroosadda iyo aroosadda waxaa ku midoobay silsiladaha muqaddaska ah ee guurka iyo ...
Waxaa loo garaacay inuu la seexday haweeneyda madaxiisa (Video)
Waxaa loo garaacay inuu la seexday xaaskiisa sayidkiisa (Video) Nin reer Zimbabwe ah ayaa helay sixitaanka noloshiisa ka dib markii lala qabtay xaaskiisa. Haweeneyda ayaa ku guuleysatay inay goobta ka baxsato iyadoo ...
1 2 3 ... 6 soo socda